Uhlangene umndeni wamaSUV akwaVW kufika iT-Roc
Fanelesibonge Bengu | November 27, 2020
LESI yisikhathi lapho abantu abaningi basuke sebehlelela ukuqala kwamaholidi kaDisemba, ukuze bahlangane nemindeni yabo.
KwaVolkswagen South Afrika, umndeni wamasport utility vehicle (SUV) awulindanga, uvele wahlangana ngokufika kweT-Roc.
Ukufika kwayo, ngemva kwesikhashana ilindiwe njengoba phesheya yaqala ukwethulwa ngo2017, kusho ukuthi asemahlanu amaSUV ale nkampani adayisa kuleli.
Sibala iT-Cross efike usuyosongwa unyaka odlule, iT-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace neTouareg.
IT-Roc nayo ingena khaxa lapho engiyiklelise khona phakathi kwencane iT-Cross nenkudlwana iTiguan. IT-Roc yakhelwe phezu kwesisekelo seGolf 7 kodwa iphakeme njengoba kwenziwe kwiT-Cross, yona esuselwe kwiPolo.
Yinde ngo-80mm uma uyiqhathanisa neT-Cross bese isiba mfishane ngo-162mm kwiTiguan.
Isikhala sayo siyenza ihlale abagibeli abahlanu nesikhala sebhuthi esingu-445 litres. Uma ulalise izihlalo ibhuthi iba ngu-1 290litres.
Ngaphandle iyabukeka icishe ifane ne-coupé ngemuva njengoba ukhakhayi luyisibaca. Inamarimu angu-17 inch kodwa uma uthanda uyakwazi ukufaka angu-18 inch okanye angu-19 inch afika neR-Line.
I-T-Roc itholakala ngaphansi kwemibala eyinqwaba kanti amakhasimde azokhetha phakathi kokuningi okuhlanganisa ukuba nokhakhayi olunombala ongafani nomzimba wemoto.
Ngaphakathi ineComposition Media ne-App Connect engu-8 inch otholakala kwi-colour touchscreen. Uma ineDiscover Media awuyidingi intambo ye-USB ukuze usebenzise i-App Connect.
Uma uthanda ufaka i-digital instrument cluster ubone yonke imininingwane ngohambo nangemoto yakho.
Bebengenza ngcono kwi-dashboard ngoba iwuplastiki kodwa uyawakwazi ukuwushuna ube yimibalabala. Okunye okufaka uma uthanda yi-panoramic sunroof, indawo yokudonsa inqola, i-discover pro navigation system nezipikha zeBeats.
IT-Roc ifika nezinhlobo ezimbili zezinjini zikaphethiloli. Eyokuqala yi-1.4 TSI enamandla angu-110kW ne-torque engu-250Nm kanti isebenzisa i-gearbox ewu-8 speed Tiptronic futhi ngo-100km bathi idla amalitha kaphethiloli angu-6.9.
Enye yi-2.0 TSI ethumela amandla angu-140kW ne-torque engu-320Nm kuwo womane amasondo. Iphuza amalitha kaphethiloli angu-8.3.
Ngakwezokuphepha ine-electronic stability control, ebikayo uma kukhona imoto eseceleni, iyasho uma umshayeli sekumele ahlabe aphumule, amalambu akhanya bha ngawe-led kanti i- adaptive cruise control, iyasho uma izoshayisa ngaphambili futhi iyabika uma iphuma emzileni isiza umshayeli ukuthi aqikelele uma epaka nokunye.
Bayigaxe neWe Connect Go eyenza ukuthi ufake i-app kwiselula esiza ukubona imininingwane ngemoto kuyo.
IT-Roc yinhle futhi iqoqekile ngaphandle yavuleka ngaphakathi. Emgwaqweni ihamba kahle futhi inezinsiza zomshayeli eziningi.
Kuthiwa sebengaphezu kuka-700 asebefake inkece bayi-oda, njengoba iqala ukudayisa ngesonto elizayo.
1.4 TSI Design Tipttronic - R489 400
2.0 TSI Design DSG - R548 300
2.0 TSI R-Line DSG - R593 600
Ifika ne-service plan yeminyaka emihlanu noma u-90 000km warranty yeminyaka emithathu noma u-120 000km ne anti-corrosion warranty yeminyaka engu-12.